तपाईसँग भएको पुरानो नोट बेच्नुस र लखपति बन्नुस्, १० लाख भन्दा बढी यी पुरानो नोटको मुल्य ? हेर्नुहोस यो माध्यम बाट बेच्न सकिन्छ – Dainik Sangalo
December 3, 2020 1079
आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नु होला eBay को नियम अनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि मात्र बिक्रि गर्नु होला । eBay एउटा माध्यम हो डिल व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ । eBay मा एउटा भारतीय नोटको मूल्य यति कायम गरिएको छ ।
यदि तपाई संग धेरै पुराना नोट हरु छन् भने इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुस, तपाई संग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुना धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नु हुन्छ तपाई । प्राय जसो चिनिया, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देश बाट नोट खरिद गर्छन मान्छे हरु । के तपाई संग नेपाली पुराना रूपैया छन् रु छन् भने आजै भदबथ को खाता बनाएर बिक्रि सुरु गरिहाल्नुहोस् १ छैनन् भने यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस भएका हरुले थाहा पाई आफ्नो पैसा बेच्न पाउन ।सामग्री स्रोत न्युज ट्वान्टीफोर टिभी
Prevआज बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल मंसिर १८ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर ०३ तारिख
Nextसवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सातै प्रदेशमा खुल्यो अनलाइन फारम, यस्तो छ भर्ने तरिका
मोरंगमा १५ बर्षकि किशोरी मकै बारीमा मृत फेला